2017 February 06 | Puntland News
Musharax Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa caawa hoygiisa kulamo kula qaatay Musharax Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas iyo Ra’iisul Wasaarihii hore Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, waxaana kulamadan wehliyay xubno ka tirsan baarlamaanka. Kulanka oo ah mid albaabada u xiran ayaa warar horu dhac ah oo laga helayo ay sheegayaan in laga wada […]
WAR DEG DEG: Xisaabiyihii ciidanka madaxtooyada Puntland oo la afduubtay.
Xisaabiyihii ciidanka madaxtooyada dowladda Puntland ayaa la afduubtay waxaana falkaas ka dambeeyay ciidan ka tirsan xarunta madaxtooyada oo gadoodsan. Inkastoo aan si rasmi ah u haynin sababta loo afduubtay xisaabiyaha ayaa hadana wararka aan helayno waxay sheegayaan in loo sababeynayo kadib markii ay mushahaar waayeen ciidanka madaxtooyada. Waxa ay dhacdadaan ku soo beegmaysaa xilli la […]
DEG DEG-Dhegeyso dhalinyaradii ciidanku ku qabteen Galkacyo oo xukumo lagu ridey iyo inta ay le’egyihiin.
Ciidamada amniga Puntland ee ka howlgalla magaalada Gaalkacyo ayaa xalay gudaha u galay guri kuyaala magaalada Gaalkacyo oo ay ku aruursanayeen kooxo dhalinyaro oo isugu jiray rag iyo dumar kuwaas oo sameynayay falal anshax xumo ah. HALKAAN KA DHEGEYSO XUKUNKA Dhalinyaradaani ayaa maxkamad la horkeenay waxaana lagu ridey xukun saddex bilood oo xabsi ah iyadoona […]
Breaking news-Horjoogaal katirsan ururka Alshabaab oo maanta gacanta u galay….
Sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha qeybta 60-naad ee Ciidamada Xooga Dalka waxaa gacanta lagu soo dhigay Saraakiil sar sare oo ka tirsan Kooxda Al-Shabaab. Saraakiishan ka tirsan Al-Shabaab ayaa laga soo qabtay deegaano ku yaalla degmooyinka Gobolada Baay iyo Bakool oo howlgal ay ka sameeyeen Ciidamada Xooga Dalka. Ibraahim Aadan Yaroow ayaa sheegay in […]
TOOS AMA LIVE U DAAWO DOODA MUSHARIXIINTA OO SOCOTA.
Dooda Musharaxiinta u taagan xilka Madaxtinimada Soomaaliya ayaa hadda Bilaabatay , waxaana maanta Gelinka hore dooda loo qaban doonaa 13 Musharax sida uu sheegay Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxweynaha Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. DAAWO
War deg deg ah oo Buuhoodle naga soo gaarey iyo Cali Khaliif Galayr oo si rasmi ah…
Madaxweynaha maamulka Khaatuma oo Maanta gaaray Magaalada Hargeysa ayaa ka dibna u duulay Magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti , waxaana halkaasi uu uga qeyb galaya Wadahadallo u dhaxeeya Maamulada Khaatumo iyo Somaliland. Cali Khaliif Galeyr ayaa xalay Safar dhanka dhulka ah waxaa uu ku gaaray Magaalada Burco ka dib markii loo diiday in uu ka […]
Gaalkacyo 6 Febraury 2017:– Ciidamada amniga Puntland ee ka howlgalla magaalada Gaalkacyo ayaa xalay gudaha u galay guri kuyaala magaalada Gaalkacyo oo ay ku aruursanayeen kooxo dhalinyaro oo isugu jiray rag iyo dumar kuwaas oo sameynayay falal anshax xumo ah. Ciidamada amniga ayaa qabtay dhalinyaradaan oo gacmaha kula jiray ficilo diinta Islaamka iyo dhaqanka Suuban […]
Wariyaha Ruug caddaaga (Cabdisalaan Harari) ayaa wuxuu wareysi dheer layeeshay Ra’iisul wasaaraha Dawladda Federalka ee Itoobiya Atto (Hailemariam Desalegn)’ Wariye Cabdisalaam Harari) ayaa weydiiyey Su’aalo muhiima oo quseeya Soomaalida guud ahaan iyo samaynta Itoobiya kuleedahay arrimaha Soomaaliya. Waraysigu waa dheeryahay laakiin anigu waxaan kasoo qaatay qeybta sida garka u qusaysa Qadiyada Somalind ee ku wajahan […]
War deg deg ah oo saaka na soo gaarey iyo barakicii ugu cuslaa abid oo ka socday qaybo kamid ah..
Wararka inaga soo gaaraya Deegaanka Dhanaane oo dhanka bari uga beegan Magaalada Xarunta Gobolka Shabelalha Hoose ee Marka qayaas ahaan u jirta 25 Km ayaa sheegaya in Halkaasi dadkii ku noolaa ay bilaabeen in ay barakacaan. Dadkan barakacaya ayaa u badan xoolo dhaqato iyo Kaluumeysato kuwaas oo sheegay in ay soo gaareen hanjabaad kaga timid […]
Daawo-Maxaa ka socda magaalada Buuhood xilli saraakiishii ciidanku bilaabeen inay..
Siyaasiga Cali Khaliif Gallaydh Madaxweynaha maamulka khaatumo ayaa maanta malleeshiyo beeleed xoog iskaga hortaageen inuu ka dhoofo gegida dayuuradaha ee magaaladda Buuhoodle isagoo diyaarad yar u raaci lahaa magaaladda Jabuuti . DAAWO
TOP NEWS-Caqabaddii ugu cuslayd oo soo wajahdey ololaha doorashada Xasan Sh iyo fursad..
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Muqdisho, ayaa waxay sheegayan in caqabad ay la soo deristay olalaha uu Magaalada Muqdisho ka wado Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo ka mid ah saddex iyo labaatanka musharax ee u sharaxan jegada madaxtinimada dalka. Tani, ayaa soo ifbaxday, ka dib markii musharaxiinta mucaaradka ay ka horyimaadeen in ay la kulmaan […]
Daawo-Muuqaal Naxdin Badan Nin Madaw ah oo haweeney 75 jir Soomaali ah Ku Kufsaday Maraykanka iyo xukun..
Dhacdo naxdin iyo murugo leh ayaa waxaa la sheegay inay ka dhacday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkaas Mareykanka ka dib markii uu nin Madoow ah uu kufsi iyo dhac uu u geystay hooyooyin Soomaaliyeed oo waayeel ah oo da’adooda lagu sheegay ilaa iyo 75 sano jir inay yihiin. Ninkaan tuuga ah oo lagu […]
WAR DEG-DEG AH: DAAWO Saraakiishii Cali Khaliif u diiday inuu ka dhoofo Buuhoodle oo ku dhawaaqay go’aan adag iyo Cali Khaliif oo iska dhiibay…
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay Puntladnews ayaa sheegaya in madaxweyne Gaas uu faro gelin ku sameyndoono olalaha qaar kamid ah murashixiinta madaxtinimada Soomaaliya ee kasoo jeeda Puntland, si uu taageero ugu helo saaxiibkiis Cumar Cabdirashiid oo ay xaaladu ku xun tahay. Madaxweyne Gaas ayaa iskudayaya inuu Cumar Cabdirashiid usoo celiyo xildhibaano badan oo ka goostay, […]
Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa markii ugu horeysay gollihiisa wasiiradda si cad ugu sheegay inuusan wax taageero ah u haynin masharax Xasan Sheikkh Maxamuud, kadib markii uu madaxweyne Gaas ka harsan waayay hadalo xan ah oo ku saabsan inuu heshiis la galay kooxda Damul jadiid. Sargaal katirsan Puntland oo ka gaabsaday […]
Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sameeyay magacaabis degdeg ah oo uu kaga jawaabayo ammaan xumada ka jirta magaalada Bosaso ee xarunta gobolka Bari, halkaas oo bilihii iyo todoboyaadyadii ugu dambeysay hoy unoqotay dilal qorshaysan iyo weeraro kooxaha argigixisadu maleegeen. Madaxweyne Gaas ayaa magacaabay guddi si gaar ah uga shaqeyndoono soo celinta amniga […]